Ogaden News Agency (ONA) – Shirwaynihii Jaaliyaadka Ogaadenya oo Maalintiisii 2aad Lasoo Gabagabeeyay.
Shirwaynihii Jaaliyaadka Ogaadenya oo Maalintiisii 2aad Lasoo Gabagabeeyay.
Posted by ONA Admin	/ August 5, 2017
Shirwaynihii Jaaliyaadka Soomaalida Ogaadeniya uga socday magaalada Frankfurt ee dalka Germany ayaa maanta oo ahayd maalintiisii 2aad lasoo gaba gabeeyay.
Waxaa shirka furay Gudoomiye Jaaliyada Germany ee martida loo yahay isaga oo Mudanuhu uu xubnaha martida ah ee shirka kasoo qaybgalay sidiiran usoo dhaweeyay. Kadib waxa wacdi diini ah soo jeediyay Sheekh Muhumad isagoo sheekhu xubnaha shirka kasoo qaybgalay la wadaagay wacdi aad u qiimo badan kuna booriyey in camalka ay qabanayaan ilaahay dartii ay u qabtaan si aakharo uu u anfaco.
Sidoo kale waxaa warbixin aad u qiimo badan oo meelo badan taabanaysa soo jeediyay Gudoomiye Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadeniya (JWXO) Adm. Mohamed Omar Osman. Gudoomiyaha ayaa xubnaha la wadaagay warbixin ku saabsan hawlaha halganka ee dibada iyo Gudahaba. Warbixintan oo ahayd mid ay kasoo qaybgaleyaashu aad ugu riyaaqeen ayuu Gudoomiyuhu kaga waramay geedi socodka Halganka Soomaalida Ogadenya iyo marxaladu uu maanta marayo.
Sidoo kale Hogaanka Arimaha Dibada ee JWXO Mudane Abdirahman Sheekh Mahdi (Maaday) ayaa warbixin si heer sare loosoo agaasimay kusoo bandhigay madasha shirwaynaha Jaaliyaadka Soomaalida Ogadenya. Mudane Maadeey ayaa arimo badan oo kusaabsan qadiyada Soomaalida Ogadenya kusoo bandhigay shirkan. Waxaa kale oo maanta warbixino kusaabsan waxqabadka Jaaliyaadka soo bandhigay Gudoomiyeyaasha Jaaliyaadka Soomaalida Ogadenya.
Waxaa shirwaynaha lagu falanqeeyay waxqabadka Jaaliyaadka, sidoo kale waxaa lagu dajiyay qorshe hawleed loogu talagalay in la hirgaliyo sanadkan nagu soo aadan haduu ilaahay yiraahdo. Wufuuda kala duwan ee kasoo qaybgalay shirwaynaha ayaa talooyin iyo fikrado dhaxal gal ah kusoo bandhigay shirka.
Xubno kamid ah Hawl-wadeenada kala duwan ee JWXO ayaa la gudoonsiiyay shahaado sharaf ay ku mutaysteen waxqabadkooda iyo sida wadaniyada leh ee ay uga soo bexeen waajiboodkooda. Xubnaha abaal marinta la gudoonsiiyay ayaa kamid ah hay’adaha kala duwan ee JWXO.
Dhinaca kale waxaa khudbado kala duwan kasoo jeediyay madasha shirwaynaha Jaaliyaadka Soomaalida Ogadenya marti-sharaf ka socday Dawlada Eritrea, Ururka Ginbot 7, Jabhada Xoraynta Oromiya (OLF) iyo qaar kale. Madaxdii khudbadaha soo jeediyay ayaa soo bandhigay warbixino aad u qiimo badan.
Shirwaynaha ayaa maanta lagu soo gunaanaday Suugaan Halgameed ay soo bandhigeen kooxda Hilaac Qaran ee Xidigaha Soomaalida Ogadenya oo madasha kusoo bandhigay Suugaan aad u qiimo badan oo dhaqaajisay shucuurta kasoo qaybgaleyaasha Shirwaynaha jaaliyaadka Soomaalida Ogadenya.